कानून, राज्य र कानून
धेरैले शायद एक अद्भुत अमेरिकी लेखक, शमूएल लैङ्गर्न फ्लेमन्स (राम्रो तरिकाले मार्क ट्वेनको रुपमा चिनिन्छ) को एक कुरा सुनेका छन्, कि उनको मृत्युमा एक व्यक्ति मात्र दुई चीजहरू पछुतो हुनेछ: कि उनी जीवनमा साना देखि माया गर्थे र थोरै यात्रा गरे। हामी पहिलो कुराको बारेमा कुरा गर्नुहुन्न, यसले मानिसको आध्यात्मिकतालाई बुझाउँछ, र यहाँ सबभन्दा सजिलो छैन। तर दुर्व्यवहार गर्न दोस्रो दु: ख छ धेरै सजिलो छ। यो पासपोर्टको लागि कागजातहरू इकट्ठा गर्न पर्याप्त हुन्छ (एक नयाँ मोडेल वा पुरानो एक - यसले कुरा गर्दैन, तिनीहरू दुबै काम गर्दछ), यात्रा कागजात प्राप्त गर्नुहोस् र अगाडि जानुहोस् - नयाँ स्थानहरू विजयी गर्नुहोस्!
कुन पासपोर्ट मैले तयार गर्नुपर्छ - पुरानो वा नयाँ नमूना?
देश बाहिरको रुसी संघको निवासीको मुख्य कागजात एक विदेशी पासपोर्ट हो। यसमा इलेक्ट्रोनिक क्यारियरहरूले रूसको नागरिक (एक नयाँ पासपोर्ट) को निजी बायोमेट्रिक डेटाको साथ वा सामान्य रूपमा बनाइएको सबै पेपर फारम (पुरानो शैली पासपोर्ट) समावेश गर्न सक्दछ। यी दुई प्रकारका पासपोर्टहरूको बीचमा फरक फरक फरक वैधता हो: बायोमेट्रिक - 10 वर्ष, सामान्यतया -5वर्ष। साथै, नयाँ पासपोर्ट फ्याक्ड गर्न सकिँदैन, किनकि यसले मालिकको औठाछापहरू समावेश गर्दछ। तर फायदे र भुक्तानीको लागि 2.5 गुणा बढी छ: बायोमेट्रिक डेटाको पासपोर्टको लागि, राज्य कर 2500 रूबल, बिना 1000 रुबल छ।
नयाँ पासपोर्टको लागि कागजात
प्राप्त र सामान्य र बायोमेट्रिक पासपोर्टका लागि दस्तावेजहरूको सेट फरक फरक छ, तर अपरिचित। पूर्ण-समय नागरिकको लागि नयाँ पासपोर्टको लागि कुन कागजात आवश्यक छ ?
तपाईलाई आवश्यक पहिलो कुरा हो, निस्सन्देह, रूसी राज्यको नागरिकको मुख्य दस्तावेज - निवासको परमिट संग पासपोर्ट। तपाइँ अग्रिममा सबै पृष्ठहरूको प्रतिहरू बनाउन सक्नुहुन्छ (त्यहाँ पनि त्यहाँका सूचनाहरू जहाँ पनि छन्), किनभने तिनीहरू अझै यो गर्न सोधिने छ। पासपोर्ट अफिसले आवेदन फारामको फारम लिनुपर्छ र यसलाई दो प्रतिमा भर्नुहोस्। अग्रिम फोटो लिनु आवश्यक छ। फोटो स्टूडियोमा विदेशी भ्रमण कागजातहरूको लागि तस्वीरहरूको लागि के आवश्यकताहरु को बारे मा थाहा छ, त्यसैले तपाईले उनीहरूको आवश्यकता किन भन्नको लागि पर्याप्त छ।
तपाईलाई नयाँ पासपोर्टको लागि के अरू कागजातहरू चाहिन्छ? कार्य रेकर्ड पुस्तक ल्याउनुहोस् (वा फेरि सुरू गर्नुहोस् यदि यो हातमा छैन), किनकि तपाईंले सर्भर गतिविधिको बारेमा सबै जानकारीको जवाफ दिन चाहानुहुन्छ। यदि त्यहाँ पुरानो विदेशी पासपोर्ट छ भने, उसको साथ र उनको (प्रतिस्थापनको लागि) लिनुहोस्। हालैदेखि, सैन्य उमेरका पुरुषहरू सैन्य सूचीबद्ध कार्यालयमा प्रमाणपत्र लिन आवश्यक छैन (यो आधिकारिक अनुरोध पठाउन FMS को कर्मचारीहरु द्वारा गरिनेछ)। पेंशनरको लागि नयाँ पासपोर्टका लागि कागजातहरू एक पेंशन प्रमाणपत्र (वा अझ राम्रो - यसको मात्र प्रतिलिपि) समावेश गरिएको छ। तपाईंले सबैको लागि शुल्कको भुक्तानीको लागि रसीद पनि जोड्नु पर्दछ।
यदि तपाइँसँग दर्तामा कुनै प्रश्नहरू छन् वा तपाईं स्पष्ट गर्न चाहानुहुन्छ कि नयाँ पासपोर्टको लागि कुन कागजात तपाईंको विशेष अवस्थामा नयाँ पासपोर्ट चाहिन्छ, तपाइँ FMS लाई कल गर्न र सल्लाह प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वा, सजिलो पनि, रूसमा सार्वजनिक सेवाहरूको इन्टरनेट साधनको माध्यमबाट एउटा अनुप्रयोग बनाउनुहोस् र विशेष गरी तपाईको ई-मेलद्वारा कागजातहरूको सूची पाउनुहोस्।
के निवासी एक जासूस, एक कूटनीतिक वा एक प्रवासी हो?
मिडिया जाँच गर्दै उनीहरूको अपरेशनको लागि आवश्यक छ
डाक्टरको विरोधमा। सुरक्षाको प्रभाव वा समय बर्बाद गर्ने?
रूसी संघको मध्यस्थता अदालतको प्रणाली। रूसी संघको मध्यस्थता प्रणालीको संरचना
महिलाहरूको लागि मतदान गर्ने अधिकार: यो एक लामो संघर्षमा दिइएको वा विजय हो
म endometriosis संग गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन् - संभावना के हुन्?
एक कम्पनी «1 C» बोरिस जी Nuraliev को संस्थापक को: जीवनी, उपलब्धिहरू र रोचक तथ्य
कसरी "नतीजा 4" मा फैशन सेट: बयान
चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ के - बच्चाहरु को लागि conjunctivitis लागि मलम?
सुनिंनु nasopharynx: उपचार र रोकथाम
तर-मास्क "बोटक्स सक्रिय विशेषज्ञ": समीक्षा
त्यहाँ Camtasia भन्दा स्क्रिन भिडियो खिच्ने कुनै राम्रो कार्यक्रम छ
Burpee किन अभ्यास राजा छ?
बक्सिङ पन्जा ग्रीन हिल: लाभ र दायरा